Iqhaza lentsha emikhakheni eyahlukene kwezomnotho - Bayede News
Amavenge oMasipala uMngeni achitha iMeneja, aqhatha noKhongolose
Ngabe le bekuyimizamo yokuvukela umbuso?
Izinkani zababili: IZitoyitoyi zicijisa imikhonto zibhekise kumfo kaSamuel
Umabhajwa azikhiphe: Akucaci ukuthi yena uMengameli ubesopheni kolukaMkhize
Ubhubhane ukhuvethe lubonakala ludamba KwaZulu-Natal
Usizi lwaboHlanga: Inja emnyama isadonswa ngeketanga
Umvimbi esilondeni kuMaKhumalo kuvalelwa umyeni
Akukho nkemba ehoshwe ndawana yabhekiswa kwabathile – Lamola
Ekugcineni isigomagoma somzabalazo sizophumula enhlabathini esayilwela
Izishoshovu zamalungelo obulili ziyabhiyoza e-USA
Ingqungquthela eRwanda inyakazise inhlese yendulo
Nangale kukaMugabe kusasinda kwehlela kwelikaMzilikazi
UKaunda washiya umlando wangunaphakade eZambia
Owomkhaya usuqala ukuphelelwa yisasasa: Ertugral
Uthi ukukhubazeka akusona isithiyo kongakwenza kusasa
Ngabe iSouth African Communist Party isiyaphenduka inkunzi ebovu edla ngandoda
Ilumbo lidla umninilo kuRamaphosa nosifumbu ubona uqhaqhazela kuKhongolose
Usephenduke izeze eliluma liqhashe uMaKhoza
UMaXhamela uthi kosala oyedwa: Umile ekutheni abanye aBehluleli yimihlola
Asifukule oHulumeni Bendawo – Ithala
Amasu okonga imali zibekwa amadaka ngoMasingana
Ukuzitapela nodlame kumabhizinisi – Umonakalo Mukhulu!
Isifo somtomdala: Ngabe uKhongolose uyogcine ubuyisene nendodana yawo?
Uncelise abasekhaya nabezizwe uMathabo Kunene
Ngabe usifanele lomthoba nhliziyo?
Aphikisayo aphumelele ukuyiphula ishoba i-ANC komasipala
I-ANC ilahlwe yicala: Bajeziselwe ukushinga nokudakwawumbuso
Nelengqwele liyopha: Abe IEC bawavumile amabatha
URamaphosa noZikalala engcindezini ngenxa yemiphumela
Kuyokweqana izibiba zomthetho ngesoMehluleli Omkhulu
Izingane zinamalungelo futhi zivikelwe yimithetho yezwe
Iziboshwa zinelungelo lokuxhumana nokuhlinzekwa ngabameli
Usizi lwabohlanga: Sisengasibuyisa isithunzi sowoHlanga ezweni lakithi uma sisebenza ngokubambisana
Sesakhululeka ngokwepolitiki kuphela asikhululekeni ngokwenkolo
Impunga yesintu: Inkolo nokwenza kwamaZulu kulandela izimiso zaMakhosi
Ubumqoka bezinkanyezi nomkhathi kwaboHlanga
ISihlalo sikaZulu: Kulokhu uhulumeni kuyomele akhethe amagama
Isono somzabalazo: Ukukhohlakala komama bomzabalazo
Umlando wethu: Nginanela ngokuthokoza umlando ngoNdlunku okaMpahleni
UMtolo akehlele kontanga yakhe
Kulokhu onqobile ku-AFCON yi-Afrika ngobubanzi
Imiphumela emihle yezemfundo ngephumelelisa nomphakathi
AbakwaShuter and Shooter izikhukhukazi zolwethunga
I-MPLA iseyithemba elikhulu kwezepolitiki e-Angola
Umkhakha wezokuvakasha kuseyiwona ophambili esiqhingini
UChakwera uthi uzoyisiphula nezimpande inkohlakalo eMalawi
Imibango yezikhundla kosopolitiki eLesotho ibambezela ukuthuthuka kwengqalasizinda
Ababaleki baphikelela eBritain kumnyama kubovu
Bahogele igesi ebivuza emayini kwafa amashumi abantu
Izono zoyise: AbaseDRC bafuna ubulungiswa eBelgium
Bayabhikisha abaseka owayenguMengameli eGeorgia
AmaNgisi afaka iRussia ingcindezi ngezinsola zokugadla ngoshevu
Inhlangano iWHO iphasisa iSinopharm yaseChina ukugomela ukhuvethe
Umnotho waseChina nowase-US uzofukula umnotho womhlaba
Badingida ngamasu okubhekana neChina neRussia abeG7
Udaba lwase Afghanistan luhlanganise inkukhu nempaka kwezombutho
Isithole uNdunankulu omusha iLebanon
Isiqalile iyachaphazeleka iTurkey ngokwenzeka e-Afghanistan
Ingase ingenelelwe i-UN eyeGreece neTurkey eCyprus
Umkhankaso omnyama ongapheli wabaphikisana nami – Obrador
Imibhikisho isiphoqe uMengameli ukuba ahoxise ukulungiswa kwentela eColombia
AmaRashiya athi asabhekana nalokho okubhekwe yi-USA e-Ukraine
Isimomazwe: Isishiphi e-Ukraine sizosulelwa kubafokazana
Ibhekene ngeziqu zamehlo i-USA neRussia nge-Ukraine
UNdunankulu uthembisa imithetho eqinile ebhekene nobushokobezi
Isivumelwano se-UN sosizo eSyria
Isexwayiso esibhekiswe kwi National Freedom Party ( NFP)
Isexwayiso esibheke kuZuma
Umhlaba ulwa nesitha esidla fumuka sidle silaza
by nguThami Zondi
Ichilo: Kuquluswa kuqulusiwe eHlalankosi
Kuyiqiniso elingephikiswe muntu ukuthi abantu abayi nganxanye bengemanzi. Ngokunjalo intsha yaKwaZulu-Natal neNingizimu Afrika yonke ngeke ifise okufanayo. Uma sigqugquzela intsha ukuba isukume ibhukule ibambe iqhaza emnothweni asilindele ukuthi yonke intsha izoba ngosomabhizinisi. Enye yentsha ingabamba iqhaza emnothweni ngokuba ngabasebenzi kanti enye ingalandela wona umkhakha wezamabhizinisi.
IKwaZulu-Natal Youth Economic Empowerment Strategy ewumqingo obhekelele ukuthuthuswa kwabantu abasha kwezomnotho esifundazweni esiphawule ngayo kweledlule ikuqhakambisa kokubili ukuzimbandakanya kwentsha kwezomnotho ngabe ukuba ngabasebenzi noma ukuba ngosomabhizinisi. Kubalulekile ukuthi umuntu omusha abheke amakhono akhe nezifiso zakhe bese ethatha isinqumo ngendlela afisa ukufaka ngayo igalelo kwezomnotho wesifundazwe kanye nezwe lonke.
Ngenxa yezinkinga ezinxantathu ezikhungethe umnotho wezwe esiziphawulile futhi ngazo kweledlule okubalwa ukwentuleka kwamathuba emisebenzi phakathi kwazo; abantu abasha bazithola sebesencindezini yokuthatha noma yini ephambi kwabo ukuze bazimbandakanye emnothweni.
Enye yezinhloso yale ngosi ukubuyisa ithemba entsheni ngokuyigquqguzela ukuthi ilandele izifiso zayo nakuba sazi ukuthi kuba umqansa ukulandela izifiso zakho njengomuntu ikati libe lilele eziko. Ikakhulukazi uthola abantu sebengena kwezamabhizinisi bengazimiselanga ngenxa yokuthi umsebenzi abawutholi. Nokho akufanelanga ngabe kunjalo ngoba ukuba usomabhizinisi isinqumo okumele umuntu asithathe ebhekile hhayi ngephutha. Yingakho kubalulekile ukuba sibuyekeze izimboni ezihamba phambili kuzwelonke nasesifundazweni kanye nalezo eziqhakambiswa iKZN Youth Economic Empowerment Strategy ukuze abantu abasha bebe nolwazi ngezimboni ezinamathuba kwezamabhizinisi.
Kubalulekile futhi ukuthi umuntu omusha ongena ebhizinisini azibone njengengxenye yokuthuthukiswa komnotho. Osomabhizinisi abancane yibona ababalulekile ekuthuthukisweni komnotho wamazwe emhlabeni jikelele. Ukuba nabantu abaningi ikakhulukazi abasha bezibandakanya ebhizinisini kungakhulisa umnotho wezwe kwenze nokuthi amathuba emisebenzi avuleleke ngoba phela belu bebaningi abaqashi kunalabo abadinga ukuqashwa. Yingakho abantu abasha kumele bakubuke njengomkhakha abangawukhetha ukungena ebhizinisini hhayi njengento oyenza uma ungawatholi amathuba omsebenzi. Ibhizinisi likunika ithuba lokuba uguqule impilo yakho kwezomnotho ngokwenza inzuzo kepha akupheleli lapho ushinthsa nempilo yalabo obanikeza izidingo ezilethwa ibhizinisi lakho ngakho akusikho nje ukuthola imali kubo kepha ukubanika imikhiqizo noma usizo abaludingayo.
Okubaluleke kakhulu ukuthi izimboni esingena kuzo njengabantu abasha zibe nomthelela emnothweni wezwe. Ukufukulwa komnotho akungabi ijoka likaHulumeni kuphela. Noma sesiwaqalile amabhizinisi asingabheki uHulumeni sonke. Intsha kumele isabalale ngomqondo ize nezimpendulo ezidingwa izwe ukuze lithuthuke naye uHulumeni akubone kubalulekile ukwenza ibhizinisi nentsha ngenxa yemisebenzi nezimpendulo ezilethayo emnothweni. Kungabi ukuthi intsha iyakhangeza ilindele ukunikwa izinto mahhala uHulumeni. Konke lokhu ngeke kwenzeka uma intsha ingaziciji futhi izilungiselele ngokungena ezimbonini ezibalulekile emnothweni. Ngeledlule siphakamise ukuthi abantu abasha babheke imikhakha esematheni ekuthuthukisweni kommnotho uma beqala amabhizinisi. Okusemqoka ukuthi intsha inethuba lokuya esikoleni ifunde ngalezi zimboni kanti lokho kwenza kube lula lapho umuntu esekhetha ukungena ebhizinisini lento ayifundele. Ikakhulukazi uma sikhuluma ngokukhomba indlela ekwenziweni kwezinto ngesimanjemanje kuba lula kumuntu owufundele lowo mkhakha.
Uma sisika elijikayo kwezokuxhumana ngobuchwepheshe esikhathini samanje sekukhona ngisho izinkundla zokuxhumana komphakathi ngabo ubuchwepheshe. Abanye benza ama-app asiza umphakathi; osomabhizinisi kanye noHulumeni ukusebenza nokuletha izidingongqangi. Into ebuhlungu ukuthi okuningi esikusebenzisayo noma izinkampani eziningi eziletha lobo buchwepheshe zivela kwamaye amazwe. Sekuyisikhathi ukuthi intsha yethu isebenzise amakhono ayo emfundo ukwenza imisebenzi emisha kwezamabhizinisi. UHulumeni wesifundazwe unezinhlelo ezibhekelele ukuthuthukiswa kwabantu abasha emikhakheni eyehlukene yamabhizinisi lokho okubizwa ngeSector-Focused Approach kuyona i-KZN Youth Economic Empowerment Strategy. Abantu abasha kumele balibhekisise iqhaza labo kuyo yonke imikhakha eqhakanjiswayo.
nguThami Zondi Feb 12, 2020
Uyiqhatha ngesinqe: Kungani uZondo eqome ukwehlukanisa uRamaphosa kuKhongolose?
Kushiyane Ukwenza: UMzizi wavikela iqembu, uRamaphosa uzivikela yena siqu